नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बागमती प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्वोधन, १५ फाल्गुन २०७६ - MadhavNepal.com
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बागमती प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्वोधन, १५ फाल्गुन २०७६
आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यु, पार्टी अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहा प्रचण्ड ज्यु, मञ्चमा उपस्थित सम्पुर्ण नेता कमरेडहरु र यहाँ उपस्थित वाग्मती प्रदेशका जिल्ला जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएका प्यारा कमरेडहरु ।
आजको यस कार्यक्रमको उद्धेश्य तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभएको छ । कार्यकर्तामा उर्जा र उत्साह पैदा गर्ने, कार्यकर्तालाई यस्तो पदार्थ दिने जसले उनिहरु आशावादी भएर जाउन् । तपाईहरु यहाँ आउँदा अनेक आशंका बोकेर आउनुभएको छ । पत्रपत्रिका पढेर तपाईहरुको दिमाग खराव भएको छ – ‘कतै यो पार्टी विभाजित हुने त होइन ? पार्टी मात्र होइन, यो आन्दोलन नै विशर्जनको दिशामा जाने त होइन ?’ एउटा कुरा स्पष्ट के हुनु पर्दछ भने, यो आन्दोलनलाई हामीले विसर्जनको दिशामा जान दिन्नौं । यो पार्टीलाई हामी विघटन र विभाजनको दिशामा जान दिन्नौं । हामीले यो संकल्प लिनुपर्छ । ७० बर्षको लामो यात्रा पार गरेर हामी आजको अवस्थामा आइपुगेका छौं । ७० बर्षको लामो इतिहासमा धेरै उतारचढाव भोगेर हामी यो अवस्थामा आएका हौं । समस्याहरु हुन्छन् । समस्याहरुसँग आत्तिनुपर्ने -विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
प्रिय कमरेडहरु, यो हाम्रो पार्टी नेपाली जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्ने, नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्ने र नेपाली जनतालाई सुख-समृद्धि प्रदान गर्ने उद्धेश्यले निर्माण गरिएको पार्टी हो । त्यसैले पार्टीको उद्धेश्यका बारेमा सवैभन्दा पहिले हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी मार्क्सवादमा विश्वास गर्दछौं । अन्तराष्ट्रियवादी हुनुपर्छ । हामी को हौं ? ‘कम्युनिष्ट हौं’ भनेर परिचय दिनुपर्दछ । हाम्रो मुल पहिचानलाई कहिलै विर्सनु हुँदैन । ‘कम्युनिष्ट हौं’ भन्ने कुरालाई बिर्सनुभयो भने तपाईको औचित्य केही रहने छैन । कम्युनिष्टहरुले नै यो देशको रक्षा गरेका छन् । नेपालको स्वाभिमान जोगाएका छन् । नेपालीहरुलाई विश्वास प्रदान गरेका छन् । कम्युनिष्ट हुनुभन्दा अघि हामीले आफुलाई ‘नेपाली’ भन्नुपर्छ । गौरवशाली नेपाली ठान्नुपर्छ । सिंगो देशलाई माया गर्न, देशभक्तीको भावनालाई प्रेरित गर्न र राष्ट्रियताको भावना प्रवाह गर्नुपर्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । सवै जातजातीका मानिसहरुलाई राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले देशभक्तीको पर्यायका रुपमा, नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई माथी उठाउने शक्तीका रुपमा अगुवाई गर्नुपर्छ र जनतामा विश्वास दिलाउनुपर्छ । हामीले जनताको विश्वास दिलाउन सकेनौं भने, पार्टीको औचित्य पुष्टी गर्न सक्दैनौं ।
हामीले दुईवटा ठुला पार्टीलाई एकतावद्ध गरेका छौं र नेपाली जनतामा विश्वास दिलाएका छौं । नेपाली कम्युनिष्टहरुमा विश्वास पैदा गरेका छौं तर यो एकता हामीले पहिलो पटक गरेका होइनौं । दुईवटै घटकहरु एकताका अनेकौं चरणबाट गुज्रंदै गुज्रंदै, उपलब्धीहरु प्राप्त गर्दै अघि बढेका हौं । तर अहिलेको यो एकताको आफैमा विशिष्ट महत्व छ । एकताको क्रममा भएका त्रुटीहरुलाई हामीले महसुस गर्नुपर्दछ । दुई वर्ष भइसकेको छ, एकताका कामहरुलाई हामीले टुङ्ग्याउन सकेका छैनौं । पोलिटव्युरो बनाउन सकेका छैनौं, अनुशासन आयोगलाई पुर्णता दिन सेकेका छैनौं, लेखा आयोग बनाउन सकेका छैनौं, निर्वाचन आयोग बनाउन सकेका छैनौं । कतिपय समस्याहरु समाधान गरी एकताका कामहरुलाई तलसम्म लैजान सकेका छैनौं, समयसीमा भित्र काम गर्न सकिरहेका छैनौं । कमजोरी भयो भनेर टाउको दुखाएर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर हामीले जे प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छौं, त्यसलाई पालना गर्ने कुरामा जोड दिउँ । एकीकरणको प्रकृयालाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउँ । एकीकरणको सन्दर्भमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामी विधी र प्रकृयामा मात्र काम गरौं । विधी र नीतिमा स्पष्ट भएर मात्र काम गर्नुपर्छ । एकता-संघर्ष-एकता यो चलिरहने प्रकृया हो । जति बहस गर्नुछ जति विवाद गर्नुछ कमिटीभित्र नै हुनुपर्छ । विधानले तोकेको समयभित्र पार्टीको वैठक बस्नुपर्छ । तपाईहरुले माथिका राम्रा कुराहरु सिक्नुस् । अरुका राम्रा कुरा सिक्नुस् । पार्टीभित्र अनेक चीजहरु हुन्छन्, राम्रा कुराहरु पनि, नराम्रा कुराहरु पनि । नराम्रा कुराहरुलाई परास्त गरेर, राम्रा कुरा स्थापित हुँदै जान्छन् । पार्टीका नेताहरु सवैले एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्ने संकल्प गर्नुभएको छ । यो सवैभन्दा ठुलो शक्ती हो । एकताको सन्देश दिनका लागि नै हामी तपाईहरुको बीचमा आएका छौं ।
कम्युनिष्ट पार्टीको ठुलो शक्ती भनेको देशभक्तीको भावना हो । यो महत्वपुर्ण शक्ती हो, यसलाई नविर्सनुस् । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तामा दोस्रो हुनुपर्ने अर्को गुण-वर्गीय भावना । वर्गीय भावना कमजोर भयो, जातीय भावना बढ्न थाल्यो, क्षेत्रीय भावना हावी हुन थाल्यो भने कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको पार्टीको रुपमा रहन सक्दैन । आम जनसमुदाय, उत्पीडित समुदाय, अत्याचारमा पिल्सिएका जनताको अगुवा दस्ता हुन सक्दैन । कता कता हामी वर्गीय भावनाबाट च्युत भएका छौं की ? समावेशिताको पक्षलाई पनि हामीले विर्सनु हुँदैन । हाम्रो समाजको विविधतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । समाजमा रहेको विभेद र असमानतालाई कम गर्न अवलम्वन गरिएको समावेशिताको नीतिलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
कम्युनिष्ट पार्टी विचारले चल्छ । विचारमात्र जपेर चल्दैन, विचारका साथसाथै व्यवहारमा उत्कृट सावित गर्न सक्नुपर्छ । विचार र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्ने अठोट हामीमा चाहिन्छ । मार्क्सवाद- लेनिनवादका आधारभुत सिद्धान्तहरुलाई नेपालको धर्तीमा कसरी लागु गर्ने ? अहिले हामीले कुरा गरिरहेका छौं –समाजवादको । नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन सक्छ ? यसबारे गहन बहस-छलफल हुन आवश्यक छ । अहिले हामीले अवलम्वन गरेका नीतिहरुले समाजवादको दिशामा लान सक्छन् कि सक्दैनन् ? तपाई हामीले प्रारम्भिक काम पनि गर्न सकेका छैनौं । प्रारम्भिक काम भनेको-गरिवी, अभाव र वेरोजगारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने । दोस्रो पक्ष भनेको के हो भने, उत्पादन र वितरणमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता धेरै पक्षहरुका बारेमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्छ ।
हामीले एकीकरणको कामलाई अव छिटो सम्पन्न गरौं । एकीकरणको कामलाई सम्पन्न गर्दा एउटा विधिमा टेकौं । एकीकरण सम्पन्न गर्न पार्टीले जारी गरेको सर्कुलर कतिपय ठाउँमा पालना भएको छैन । यो प्रदेशमा गर्नुभएको छ भने त्यो खुसीको कुरा हो । जिल्ला तहमा गर्नुभएको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । यो गुटको वा त्यो गुटको, मेरो पक्षको- अर्को पक्षको भनेर काखा-पाखा गर्नुभयो भने न्याय गरेको ठहरिंदैन । पार्टी विधानको पालना गरेको ठहरिंदैन । पार्टीको विधिको पालना गरेको ठहरिंदैन । त्यसैले कमजोरी भएको छ भने सुधार्नुहोस् । हिजो कमिटीमा बसेकाहरुलाई पन्छाउन मिल्दैन । कमिटीको संख्या सानो बनाउनु छ भने, जुनियरलाई हटाउन मिल्छ, सिनियरलाई हटाउन मिल्दैन । कमिटीको संख्या बढाउनु छ भने, जुनियरलाई थपेर सिनियरलाई पन्छाउन मिल्दैन । यो विधिलाई जिल्ला तहमा लागु गर्नुभएको छ कि छैन ? नगर/गाउँ/वडामा र जनसंगठनमा लागु गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । पार्टी एकताको कामलाई तल्लो तहसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सल्लाहकार, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, विभागहरु जिल्ला तहसम्म हुन सकेका छैनन् । धेरै ढिलो भइसक्यो । छिटो एकताको काम सम्पन्न गरेर, पार्टीमा नयाँ उर्जा कायम गरेर, योजनावद्ध रुपमा जनताको बीचमा जानुपर्छ । एकता सुदृढ भयो भने कार्यकर्ता जनताको बीचमा जान्छन् । अहिले अरु पार्टीहरु प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने अवस्थामा छैनन् । उनिहरु जनताको विश्वास जित्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले हामीले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, एक्लो छौं भनेर दम्भको शिकार बन्नु हुँदैन ।
हाम्रो सामु अवसर नै अवसर छन् तर चुनौति पनि छन् । चुनौति के के छन् ? त्यसको सामना कसरी गर्ने ? त्यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ । चुनौतिहरु सामना गर्ने उपायहरु खोजी गर्नुपर्छ । हामीसँग विशाल सम्भावना छन् । हामीले अहिलेको जनमतलाई अझै बढाउनुपर्छ । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाइ मत हामिसँग छ । ६ वटा प्रदेशमा आरामदायी बहुमत हामिसँग छ । २ नम्वर प्रदेशमा पनि सवैभन्दा ठुलो पार्टी हामी नै रहेका छौं तर यतिले पुग्दैन ।
अव हामी गुनासो गर्ने ठाउँमा छैनौं । माग गर्ने ठाउँमा छैनौं । माग पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा छौं । शासन हाम्रो हातमा छ, राज्यसंयन्त्र हाम्रो हातमा छ । राज्यसंयन्त्र र साधनस्रोतको सदुपयोग गरेर आम जनताको चाहना बमोजिम हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ । जनताको बीचमा दुईवटा काम गर्नुपर्छ । एउटा भौतिक विकासको काम गर्नुपर्दछ । अर्को जनतामा चेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ । जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्न सक्नुपर्दछ । नयाँ संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ । भौतिक विकास एउटा पाटो छ भने चेतनाको विकास अर्को पाटो छ । कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको विकासमा चेतना-जागरण पैदा गर्न र जनताका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । पार्टी र जनताबीचको सम्वन्ध पानी र माछाको जस्तो हुनुपर्छ । जनता र कार्यकर्ताबीचको सवन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तामा हुनुपर्ने आधारभुत चरित्रहरु छन् । पहिलो सैद्धान्तिक पक्ष, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, कम्युनिष्ट पार्टीको मुल उद्धेश्यलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । यस बिषयमा पार्टी स्कुल विभागले अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दोस्रो हो संगठनको सिद्धान्त, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । सवै समस्याहरु कमिटीभित्र राख्नुपर्छ । कमिटीको नियमित वैठक बस्नुपर्छ । समयभित्र वैठक बस्नुपर्छ । गहन बहस गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने सर्वसहमतिले निर्णय गर्नुपर्छ नभए अल्पमत-बहुमत गरेर भएपनि निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णयको सवैले पालना गर्नुपर्छ । यो विधिलाई पालना गर्न सक्ने हो भने, कम्युनिष्ट पार्टीलाई कसैले कमजोर बनाउन सक्दैनन् । संगठनमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । अहिले जसरी पनि पद ओगट्ने प्रवृति देखिएको छ । जसरी पनि पदमा पुग्ने तर जिम्मेवारी पुरा नगर्ने प्रवृति छ । पदमा रहनु भनेको योग्यता- क्षमता प्रदर्शन गर्नु हो । जिम्मेवारी पुरा गर्नु हो । जसले जिम्मेवारी पुरा गर्दैन उ पदमा बस्न लायक हुँदैन । तेस्रो पक्ष भनेको आचरण, कस्तो छ व्यवहार ? जनतासँग कस्तो छ सम्वन्ध ? यो अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हुन्छ । त्यसैले विचारको पक्ष, संगठनको पक्ष र आचरणको पक्षमा गहन छलफल गर्न सकेनौं भने क्रान्तिकारी कार्यकर्ता निर्माण गर्न सक्दैनौं । हामीले कार्यकर्तालाई श्रम र उत्पादनमा जोड्न सक्नुपर्छ । उनिहरुको जीवनयापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यदि कार्यकर्ताको समस्या समाधान गर्न सक्नुभएन भने उनिहरु अनुचित काममा लाग्छन् । यो विषयमा पनि पार्टीमा गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कमरेडहरु, हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प गरेका छौं । समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने संकल्प गरेका छौं । संविधानमा नै हामीले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छौं । यसमा निजी क्षेत्रको भुमिका, सहकारीको भुमिका, सार्वजनिक क्षेत्रको भुमिका के हुन सक्छ ? र कसरी हामीले यो चेतनालाई व्यापक रुपमा देशव्यापी फैलाउने ? आमजनतालाई कसरी गोलवन्द गर्ने ? यसविषयमा हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । हामीले समावेशीतालाई अवलम्वन गरेका छौं । राजनीतिमा मात्र होइन अर्थतन्त्रमा पनि समावेशिताको कुरा हामीले गरेका छौं । आज जनतालाई सहकारीमा आवद्ध गर्ने र सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनमा उनिहरुलाई सामेल गराउने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विजयको खवरले विश्वभरका कम्युनिष्टहरु खुसी भएका छन् । विश्वभरका कम्युनिष्टहरु निकै उत्साहित भएका छन् । उनिहरुले नेपालबाट सिक्न चाहन्छन् । नेपालबाट प्रेरित हुन चाहन्छन् । कतिपय देशमा समाजवाद निर्माण भयो तर पछि अवसान भयो, चुनावबाट सरकार बन्यो, तर टिक्न सकेन । यो खतराबाट जोगिनुपर्छ । चुनौतिहरु छन् । हामीबाट सिर्जित चुनौतिहरु पनि छन् । आउनसक्ने चुनौतिहरु छन् । यी कुराहरुमा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लामो यात्रा हामीले पार गरेका छौं । ठुलो अठोट गरेका छौं । तीन करोड जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउने संकल्प गरेका छौं । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएका छौं । समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य राखेका छौं । जनताले हाम्रो कामलाई राम्रो भनेका छन् कि छैनन् ? जनताको मन र विश्वास जित्न सकेका छौं कि छैनौं ? जनताकोबीचमा रहनुभएका कार्यकर्ताहरुले जनताको नाडी छामेर, जनताको भावना बुझेर पार्टीलाई सुझाव र सल्लाह दिनुपर्छ । गुनासाहरुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । भ्रम फैलाइएको छ भने त्यसलाई चिर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । राम्रा वा तितै सुझाव छन् भने पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न तयार हुनुपर्छ ।
एकतावद्ध भएकै कारणले हामीले चुनावमा राम्रो परिणाम प्राप्त गरेका हौं । एकताको संकल्प नगरेको भए, अलग अलग चुनाव लडेको भए आजको शक्ती प्राप्त हुने थिएन । अव हामीले बिचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो एकतालाई कसरी वलियो बनाउने ? संगठन कसरी सुदृढ बनाउने ? कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्ने ? कमिकमजोरीलाई कसरी सुधार गर्ने ? अहिले हामीले पार्टी सुदृढिकरण अभियान चलाइरहेका छौं । दोस्रो चरणमा हामीले जनसम्पर्क विस्तार अभियान गर्नेछौं । जनताको माझमा जाने कार्यक्रम, सम्वन्ध विस्तारसँग जोडिएको हुन्छ । भर्खरै पार्टीको दोस्रो महत्वपुर्ण केन्द्रीय कमिटीको वैठक सकिएको छ त्यसमा गहन छलफल पनि गरेका छौं । देशभरबाट आउनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरुले गुनासा राख्नुभयो, असन्तुष्टी पोख्नुभयो, विचारहरु राख्नुभयो त्यसलाई संलेषण गरेर अध्यक्षले जवाफ दिनुभयो । एकताका धेरै काम बाँकी छन् । ति कामहरु आधारभुत रुपमा सम्पन्न भयो भन्न सकिन्छ तर अझै पनि धेरै काम बाँकी छन् । अन्तर्विरोधहरु विद्यमान छन् । कतिपय ठाउँमा अवरोधहरु खडा भएका छन् । ति समस्याहरु हल गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि संगठन विभागले जिम्मा लिएको छ । यी समस्या समाधान हुनेमा म आशावादी छु ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य उज्ज्वल छ । जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले राम्रो ढंगले काम गरोस् भन्ने चाहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चाहना र भावनालाई बुझोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसको लागि हामीले हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ बनाउन सक्नुपर्छ । सुदृढिकरणको सन्दर्भमा विचारमा, संगठनमा, आचरणमा भएका कमजोरी सुधार्न सक्नुपर्छ । हाम्रो सामु राम्रो सम्भावना छ । आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक रुपान्तरण र सांस्कृतिक रुपान्तरणको काम गरेर हामीले जनतालाई सुखी र समृद्ध जीवन दिन सक्छौं । राजनीतिक क्रान्तिको चरण हामीले पार गरेका छौं । अव हामी आर्थिक क्रान्तिको अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौं । सँगै हामीले सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यो काम सम्पन्न गर्न पार्टी नेताहरुको बीचमा राम्रो एकता, आपसी विश्वास कायम गर्नुपर्छ । एकता समझदारी र विश्वास कायम गर्न सक्ने हो भने जस्तोसुकै चुनौति पनि सामना गर्न सकिन्छ । आत्तिनुपर्ने छैन । यहि विश्वासका साथ आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।